हेर्नुहोस् आजको तपाईको भाग्य (फागुन २६ गते शनिबारको राशिफल)::Leading Nepal News
हेर्नुहोस् आजको तपाईको भाग्य (फागुन २६ गते शनिबारको राशिफल)
आज वि.सं. २०७४ साल फागुन २६ गते शनिबार, तदनुसार ई. सं. २०१८ मार्च १० तारिख
गरेको परिश्रमको ढिलो गरी प्रतिफल आउने छ ।आज बिग्रिनै लागेको कुनै काम बन्न सक्छ । पारिवारिक समस्या हल गर्ने दिन हो । मनमा आध्यात्मिक र वैराग्यका भावना सञ्चरण हुनसक्छन् ।मानप्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादाप्रति सजग रहनुहोला ।
व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा राम्रै हुनेछ । आँटेका काममा ढिलासुस्ती हुनसक्छ । साथीभाइको सहयोग मिल्नेछ तर पछि आफू एक्लैले काम पूरा गर्न सकिने छ ।दिउँसो भने मनमा विरक्तिका भावना उत्पन हुन सक्छ ।
तपाईको निर्णय क्षमताको प्रशंसा हुनेछ । गरेका काममा ढिलोमात्र सफलता प्राप्त हुनेछ । बेलुकीपख मनमा हर्ष, आनन्द र प्रसन्नताको सञ्चार हुनेछ । प्रेम तथा प्रणयका लागि अनुकूल समय छ, दाम्पत्य जीवन असल हुनेछ ।
आज तर्क, बहस र वादविवाद हुने सम्भावना छ । असन्तुष्टि र छटपटी बढ्ने छन्् । प्रेमसम्बन्ध वा दाम्पत्य जीवनमा समस्या आउनेछ । झगडा र विवादले तनाव बढाउला, सतर्क रहनुहोला । तार्किक र बौद्धिक क्षेत्रबाट सफलता लिन गाह्रैपर्ला ।
बौद्धिक क्षमता राम्रो रहने छ । आज बौद्धिक, साहित्यिक र सिर्जनात्मक क्षेत्रमा समय र धन लगानी गर्दा फाइदा हुनेछ । एक्लोपन र निराशा बढ्नाले मन एकतमासको हुनेछ । तत्काल योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुनेछ ।
आज कुनै नयाँ काममा हात हाल्नु उपयुक्त नहोला । शरीरमा आलस्यले डेरा जमाउने छ । मानसिक तनाव उत्पन्न होला । महत्वाकाङ्क्षी योजनालाई गोप्य राखेमा मात्र सफलता पाउनुहुनेछ । कुनै महत्त्वपूर्ण काम बन्ने सम्भावना पनि छ ।
सानो प्रयासले भाग्योन्नतिको अवसर आउने छ । आध्यात्मिक भावनाको विकास हुनेछ । मानप्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा वृद्धि हुनेछ । विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग र सल्लाहले महत्वपूर्ण काम बन्नेछ । रोकिएको कामहरु बन्न सक्छ ।
आज आर्थिक क्षेत्रमा सामान्य लाभ प्राप्त हुनेछ ।आज धैर्य, संयम र सचेत भई बस्नु राम्रा हुनेछ । बोलीमा संयमता अपनाउनु राम्रो हुन्छ । चिसो चिजबिज खानपान नगर्नु बेस हुनेछ । छिट्टै प्रतिफल आउने लगानीले फाइदा हुनसक्छ ।
नयाँ व्यापार वा व्यवसायतर्फ मन आकर्षित हुनेछ । मनमा देखिएका निराशा र खिन्नता क्रमशः हट्दै जानेछ । आजको दिन दुःखसुख, आयव्यय, सफलता–असफलता उस्तैउस्तै होला ।मित्रवर्गबाट सोचेजस्तो लाभ प्राप्त हुनेछ ।
तर्क, वहस र वादविवादमा विजय प्राप्त हुनेछ । दर्शन र अध्यात्मतर्फ मन लाग्नेछ । मनमा वैराग्य र निराशाका भावना उत्पन्न हुनसक्छ । टाढाका आफन्तसँग सम्बन्ध कायम हुनेछ । दानपुण्य वा परोपकारका क्षेत्रमा लगानीको समय छ ।
आम्दानीका प्रयास सफल हुनेछन् । प्रतिस्पर्धीहरू परास्त हुनेछन् । सामाजिक क्षेत्रबाट प्रशंसा, सम्मान र सहयोग प्राप्त हुनेछ ।सरकार र राज्यपक्षबाट लाभ प्राप्त हुनेछ ।साथीभाइबाट सहयोग जुटाउन सकिने छ । उत्साहमा बृद्धि हुनेछ ।
व्यापार गर्नेले सोचेजस्तै लाभ लिन सक्नेछन् । गरेको प्रयास सार्थक हुनेछ । वादविवादमा परे पनि विजय आफ्नै पक्षमा रहने छ । सामाजिक कामबाट प्रशंसा मिल्ला । वैदेशिक क्षेत्रमा काम गर्ने वा घरपरिवारबाट टाढा बस्नेका लागि राम्रो दिन छ ।
यी राशि हुनेको आज भाग्य चम्किँदै ! हेर्नुहोस् आजको राशिफल (पौष ०१ गते आइतबार)
यी राशि हुनेको आज भाग्य चम्किँदै ! हेर्नुहोस् आजको राशिफल (मंसिर २९ गते शनिबार)
यी राशि हुनेको आज भाग्य चम्किँदै ! हेर्नुहोस् आजको राशिफल (मंसिर २२ गते शनिबार )
यी राशि हुनेको आज भाग्य चम्किँदै ! हेर्नुहोस् आजको राशिफल (मंसिर २१ गते शुक्रबार)
यी राशि हुनेको आज भाग्य चम्किँदै ! हेर्नुहोस् आजको राशिफल (मंसिर मङ्सिर १७ गते सोमबार )
यी राशि हुनेको आज भाग्य चम्किँदै ! हेर्नुहोस् आजको राशिफल (मंसिर १४ गते शुक्रबार )
यी राशि हुनेको आज भाग्य चम्किँदै ! हेर्नुहोस् आजको राशिफल (मंसिर १३ गते बिहीबार))